ᐈ Ulwakha Kanjani Uhlu lwe-M3U IPTV ngo-【2022】 - KULULA
M3U Spain uhlu
Latin IPTV uhlu
Olunye Uhlu lwe-M3U
Buka Uhlu lwe-M3U ku-VLC
Buka uhlu lwe-M3U ku-Roku
Izinhlelo zokusebenza ezifakiwe
Landa i-APK ye-WhatsApp Delta ye-GB
Inguqulo yakamuva ye-BlackMart APK
I-Spotify Premium mod APK
Landa i-Deezer Premium MOD
Inguqulo yakamuva ye-MX Player Pro
Landa i-Tinder Gold Mod APK
Uhlu oluhle kakhulu lwe-M3U IPTV lwango-2022
I-IPTV ubuchwepheshe obube nentuthuko enkulu kule minyaka eyishumi edlule, futhi phakathi nalolu hambo, sebuguquke kakhulu. Njengamanje cishe noma iyiphi inkundla yokusakaza-bukhoma yokuzijabulisa isebenzisa le mithetho ukuze idale uhlu lwe-M3U.
Uma namanje ungazi mayelana ne-IPTV nohlu lwe-M3U, lokhu okuthunyelwe kungokwakho. Uzothola yonke into mayelana nale phrothokholi ukuze ujabulele izinketho esinikeza zona kwezokuzijabulisa nokuthi ungazakha kanjani olwethu uhlu lwe-M3U ukuze ulungeze kumaseva ethu e-IPTV.
Luyini uhlu lwe-M3U?
Yibuphi ubuchwepheshe obusebenzisa i-M3U ukusebenza?
Yikuphi okuqukethwe okungajatshulelwa ngohlu lwe-M3U?
Ungalanda kanjani futhi kuphi uhlu lwe-M3U?
Luyini uhlu lweziteshi ze-IPTV?
Umehluko phakathi kwe-IPTV nokusakaza
Ulwakha kanjani uhlu lwe-M3U IPTV ngezinhlelo
Ungalwenza kanjani uhlu lwe-M3U IPTV ngenothiphedi futhi uhlele iziteshi
Luhlanganisani uhlu lwe-IPTV M3U yaseMexico Online?
Uhlu lwe-IPTV - M3U Mexico
Uhlu lwe-M3U lweziteshi zaseMexico
Uhlu lwama-movie we-M3U oluvela e-Mexico
Uhlu olungcono kakhulu olubuyekeziwe nolwamahhala lwe-M3U
Uhlu lwe-IPTV - i-M3U yaseSpain nezemidlalo
Uhlu lwe-IPTV - isiLatini nezwe le-M3U
Uhlu lwe-IPTV - i-M3U yamamuvi nochungechunge
Ungalayisha kanjani uhlu lwe-M3U ku-Qviart Combo V2
Ungalufaka kanjani uhlu lwe-M3U ku-SS IPTV
Kungani ukhiqiza uhlu ku-SS IPTV?
Uhlu lwe-Latin iptv
Inguqulo yakamuva yeWhatsapp Delta
Ifomethi ye-M3U isandiso sohlobo oluyisicaba, esingavulwa futhi sihlelwe nganoma yisiphi isihleli sombhalo, isibonelo, i-notepad ye-Windows. I-M3U isifinyezo se-“MPEG version 3.0 URL”.
¡Lolu hlobo lwefayela lusetshenziselwa ukwakha noma ukugcina izinhla zokudlalayo zemidiya noma Izinhla zokudlalayo.
Ekuqaleni kwayo ibisekelwa yiWinamp kuphela, kodwa namuhla ingasekelwa inqwaba yabadlalis, okwenze kwaba indinganiso uma kuziwa ekudaleni uhlu lwadlalwayo.
Okwenziwa wuhlu lwe-M3U ukucacisa indawo yawo wonke amafayela e-multimedia esifuna ukuwadlala. Kulokhu, kunefomethi ethile yokubhala okufanele siyisebenzise lapho sifuna ukwakha izinhlu zethu. Sizokufunda lokhu ngezansi.
Uhlu lwe-M3U lwakhiwe uchungechunge lwamakheli ewebhu obekuyindawo ekude yokuqukethwe ongakujabulela, ungafaka izinhlelo ze-premium noma iziteshi ezigcwele kusuka noma yikuphi emhlabeni, kungakhathalekile ukuthi ezasekhaya, ezezwe noma ezamazwe ngamazwe.
Ukuze uhlu lwe-M3U lusebenze, kufanele lwengezwe kusidlali semidiya esisekela lolu hlobo lwefayela.. Okwamanje, cishe noma yiluphi uhlelo lokusebenza noma uhlelo oluklanyelwe ukudlala okuqukethwe kwe-multimedia luyakwazi ukudlala le fomethi yefayela ngaphandle kobunzima.
Lezi zinhlobo zohlu zinenzuzo yokuthi zihlale zibuyekezwa kude.Ngale ndlela, ngeke kudingeke sikhathazeke ngokuphelelwa yisikhathi kwama-URL lapho idatha yokuqukethwe kwe-multimedia esikuthanda kakhulu isingathwa khona.
Uhlu oluhamba phambili lwe-M3U lwe-IPTV eSpain 2022
Uhlu oluphezulu lwe-Latin M3U lwango-2022
Ulwakha kanjani Uhlu lwe-M3U lwe-Kodi
Ungalubuka kanjani uhlu lwe-M3U ku-Roku
Ungalungeza kanjani uhlu lwe-M3U ku-Plex
Ungalungeza kanjani uhlu lwe-M3U ku-OTTPlayer
Ungalubuka kanjani uhlu lwe-M3U ku-VLC
Uhlu lwe-M3U lungaqukatha noma yiluphi uhlobo lokuqukethwe ongalucabanga. Ukwazi ukuthola uhlu olukhethekile lwamashaneli ahlukahlukene noma ngeziteshi ezithile zesifunda noma zezwe.
Ngokufanayo, ungathola noma ulondoloze amamuvi, uchungechunge namadokhumentari ngolimi lwakho lwendabuko noma ngezinye izilimiNgisho nemibhalo engezansi ingagcinelwa okuqukethwe ngakunye kwalokhu.
Amafayela endawo nawo angagcinwa ngohlu lwadlalwayo lwe-M3U, ukuze ukwazi ukuhlela uhlelo lokudlala, bese ujabulele uhlu lwakho lokudlalwayo kunoma iyiphi idivayisi noma isidlali semidiya.
Ngohlu lwe-M3U singajabulela ukuzijabulisa okubanzi kokusakaza kunoma iyiphi idivayisi noma ngezidlali zokuqukethwe kwe-multimedia. Okulandelayo sizochaza ukuthi ungalanda kuphi futhi kanjani uhlu lwe-M3U.
I-IPTV ibala iSpain
Ukulanda uhlu lwe-M3U kufanele uqale uye kulo lesi sixhumanisi, bese ufaka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Uma ungenayo, ungayidala kalula ngokulandela inkinobho "Vuma" Noma ungasebenzisa izinkundla ze-Google, i-Facebook ne-Twitter ukuze ukwenze ngokushesha nakakhulu.
Uma sesilifakile ikhasi, siya kubha yokusesha bese sibhala igama lohlu esifuna ukulicinga. Kubaluleke kakhulu ukuthi uhlale ubeke isiqalo "IPTV" o "M3U" ukuze injini yokusesha isiyise ngqo kulezi zinhlobo zohlu.
Ukuze uthole uhlu olubuyekeziwe yiya ebhokisini elithi "Ukuhambisana" bese ukhetha inketho "Idethi" bese uzobona lonke uhlu lwakamuva, nokuthi kungenzeka lusebenza lulonke.
Ekugcineni ukhetha ngokuchofoza ohlwini oluthandayo, bese uqhubeka nokukopisha ikheli elivela kubha yamakheli. Lena i-URL ozoyikopisha ohlelweni lwakho lwe-IPTV noma kusidlali sokuqukethwe se-multimedia osisebenzisayo.
Uma ufuna ukwazi ngezinhlelo ezihamba phambili nabadlali bohlu lwe-IPTV noma lwe-M3U ongakwazi ukuzifaka, hlola okunye okufakiwe kwethu ukuze ukwazi ukukhetha leyo evumelana kangcono nezidingo zakho.
Manje, okokufundisa esisanda kusichaza kusebenza kwelinye lamakhasi adume kakhulu ukuthola uhlu lwe-M3U, kodwa lena akuyona ukuphela kwewebhusayithi esigabeni sayo. Uhlu olulandelayo luchaza amanye amawebhusayithi ukuze uthole izinhlu zakho ezihamba phambili ze-M3U.
I-Stratustv: Ikubonisa uchungechunge lohlu ngefomethi ye-M3U ongakwazi ukuyengeza futhi uyidlale kalula. Izinhlu zihlelwa ngokwezwe nangezilimi ezihlukahlukene. Uhlu ngalunye luneziteshi zokuqukethwe ezihluke kakhulu kukho konke ukunambitheka nanoma iyiphi iminyaka.
IPTVSRC: Kuleli khasi ungathola izinhlu ezibuyekezwa ngosuku. Inikeza izinhlu ku-M3U ezinezinhlobo ezahlukene zokuqukethwe eziteshini, uchungechunge namamuvi, ngaphezu kwezilimi eziningi nanoma iyiphi iminyaka. Futhi njengenani elingeziwe ohlwini ngalunye ungathola iziteshi nge-HD.
Ikufanele: Empeleni iyibhulogi ekhuluma ngezihloko ezahlukahlukene. Nokho, kulokhu okulandelayo isixhumanisi Ungaya ngqo kokufakwayo okubonisa uchungechunge lohlu olubuyekeziwe lwe-M3U nokuthi ungathola ukuthi iluphi uhlobo lokuqukethwe, njengoba lu-odwe.
Wonke ama-APK: Le bhulogi inokufaka okunochungechunge lwezinhlu ezibuyekeziwe nezimahhala ngokuphelele. Ukuze uwathole chofoza lapha.
I-Fluxus.TV: Kule webhusayithi ungathola okungapheli kohlu ngefomethi ye-M3U elungele ukukhiqizwa kabusha ngaphandle kwamaphutha ngoba ahlala ebuyekezwa. Okuqukethwe kuhluke kakhulu futhi ungathola uchungechunge, amamuvi neziteshi zanoma iyiphi iminyaka nangezilimi ezahlukene.
I-IPTV imele i-Internet Protocol Television, ethi Ubuchwepheshe obusebenzisa iphrothokholi ye-IP kanye ne-inthanethi ukudlulisa okuqukethwe kwe-multimedia ngokusakaza. Ngokuvamile isetshenziselwa ukudlulisa iziteshi, uchungechunge namamuvi ngenethiwekhi ye-broadband.
Ukusetshenziswa kwenethiwekhi ye-broadband kuqeda ukusetshenziswa kwezintambo ezicasulayo kanye ne-antenna. I-IPTV iwuhlu lweziteshi ezisakazwa ku-inthanethi futhi esingafinyelela kuzo cishe kunoma iyiphi idivayisi, njengoba lezi zinhlu singazilayisha kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza lokukhiqiza kabusha okuqukethwe kwe-multimedia.
Kukhona uhlobo lohlu olusetshenziswa kakhulu kumapulatifomu e-IPTV, yilawo adalwe ngezandiso ze-M3U. Ake sibone-ke ukuthi zimayelana nani nokuthi singazakha kanjani izinhlu zethu nge-IPTV.
I-IPTV idume kakhulu ngenxa yokuthi awudingi ukuqasha opharetha ukuze ujabulele ukusakazwa kokuqukethwe, lokhu kukukhulula ezindlekweni ezengeziwe ezizuzisa kakhulu ukonga umnotho. Uma uhluleka lokho, ungajabulela i-IPTV ngohlu lwe-IPTV noma lwe-M3U.
Uhlu lwe-IPTV lusetshenziselwa ukugcina amakheli noma ama-URL amashaneli ahlukene asebenza ku-IPTV afinyelelwa ngawo kuwebhu. usebenzisa amakheli e-IP akude.
Uhlu lwe-IPTV esivame ukuluthola ku-inthanethi lufika ngefomethi ye-M3U, okuyifomethi efanelekile yendawo yonke, futhi ehambisana nabadlali abaningi bokuqukethwe kwe-multimedia, nokho, ungathola uhlu lwe-IPTV ngefomethi ye-M3U8 noma ye-W3U.
Kokubili isevisi ne-IPTV nokusakaza kunokufana okuningi ngokuphathelene nezinye izici, nokho, kunomehluko othile ohlinzeka ngevelu eliyingqayizivele kusevisi ngayinye yalezi ezihloselwe ukuzijabulisa.
Umehluko ofaneleka kakhulu ukuthi uhlu lwe-IPTV lusebenzisa inethiwekhi yangasese, ethanda ukusatshalaliswa kwedatha ngendlela eshesha kakhulu futhi ezinzile.. Ngaleso sikhathi, izinsiza zokusakaza zifinyelela kunethiwekhi efanayo evulekile, engaphethwe njenge-imeyili nokuphequlula iwebhu, okungukuthi, inethiwekhi engazinikele.
Ngamafuphi, isevisi yokusakaza kamabonakude idinga izidingo eziphezulu zokuxhuma, kuyilapho uhlu lwe-IPTV lungadingi izidingo eziningi kangaka, ngakho-ke ungakwazi ukujabulela okuqukethwe ngesivinini esingesona esiphezulu kakhulu se-inthanethi.
Uma ufuna ukwenza uhlu lwe-M3U, kufanele uqale wazi ukuthi kunesakhiwo somyalo esiyingqayizivele okufanele usikhumbule ukuze wakhe uhlu olusebenza kahle lwe-M3U IPTV.
Lesi sakhiwo silandelayo:
#EXTINF: (ubude), (izibaluli), (isihloko sesiteshi)
Sizochaza kabanzi ukuthi iphrothokholi ngayinye isho ukuthini:
# EXTM3U: Kuphoqelekile ukuyibeka ekuqaleni kombhalo kuphela. Lo myalo utshela umdlali ukuthi uhlu lukufomethi ye-M3U enwetshiwe futhi lokhu kungenxa yokuthi inezimfanelo ezengeziwe ezengeziwe ezingafinyelelwanga ohlwini oluyisisekelo lwe-M3U.
#EXTINF: Kuwumyalo obonisa lapho imethadatha eyengeziwe ukuthi Ukusakaza ngakunye ohlwini iqala kuphi. Lo myalo kufanele usetshenziswe njalo lapho sifuna ukwengeza isiteshi, okungukuthi, uma sibala iziteshi eziyishumi, umyalo kufanele uvele izikhathi eziyishumi esiteshini ngasinye.
Iphinde ihambisane nezimfanelo ezithile ze-multimedia esizozenza kabusha. Kuhlanganisa: ubude besikhathi, izibaluli kanye nesihloko sesiteshi.
Ngamunye wabo kufanele ahlukaniswe ngendawo engenalutho. Ake sibone ukuthi ngayinye yalezi zimfanelo isetshenziselwani.
Ubude besikhathi: ihambisana nesikhathi esikalwa ngamasekhondi efayela le-multimedia okukhulunywa ngalo. POhlwini lwe-IPTV amapharamitha amabili kuphela aziwayo, inani elinguziro (0) kanye nenani khipha okukodwa (-1).
Ngokuvamile kufanele sisebenzise inani elingu-1 ukuze sibonise umdlali ukuthi ubude besikhathi sokusakaza abulungiswa noma abunakunqunywa.
Izibaluli: Ulwazi olwengeziwe esifuna ukulubonisa ngaphakathi komdlali. Le datha ingaba umhlahlandlela wokuhlela, izilungiselelo, ilogo yesiteshi, izilimi nezinye izibaluli.nokho lokhu kuyinketho.
Isihloko sesiteshi: ikhombisa igama elizovela kumdlali. Kumelwe yandulelwe ukhefana (,) futhi kungabikho sikhala ngemva kukakhefana.
URL: Lapha sizokhombisa i-URL noma ikheli lewebhu lapho isiteshi, uchungechunge noma imuvi esifuna ukuyengeza ohlwini isingathwe khona.
Ngokufanayo, ikheli noma indlela yalapho okusingathwa khona ifayela le-multimedia yendawo ibhalwe lapha, okungukuthi, leli eligcinwe kukhompuyutha yethu.
Manje njengoba usukwazi lokhu, singaqala ukudala izinhla zokudlalayo ngefomethi ye-.m3u, futhi into yokuqala esizoyenza ukuvula isihleli sombhalo ngokuya ngesistimu yethu yokusebenza.
Okulandelayo kuzoba ukuqala ukwengeza imininingwane yezixhumanisi esifuna ukuzikhiqiza kabusha ngokulandela umthetho olandelwayo esesiwukhombisile ngaphambilini. Ukuze ubakhumbule:
Khumbula ukuthi umyalo wokuqala; okungukuthi; # EXTM3U kufanele yengezwe kanye kuphela emgqeni wokuqala, akufanele iphindwe kusukela lapha kuya phambili. Ake sibheke ezinye izibonelo zale miyalo:
#EXTINF:-1, Isampula Lefilimu (2017)
#EXTINF:-1, Isiqephu sokuqala se-Star Wars
H: \_ PELICULAS \_ STAR WARS \_ Star Wars Isiqephu I The Phantom Menace (1999) .mkv
Ekugcineni, uma sesingeze amakheli azo zonke iziteshi, uchungechunge namamuvi esifuna ukuwabona, kufanele siqhubeke nokuwalondoloza.
Kuthebhu yefayela, kufanele uye kunketho ethi "Londoloza njenge". Lapho iwindi elilandelayo liboniswa, kufanele uthole indawo lapho uzogcina khona ifayela futhi esigabeni samagama kufanele ubeke igama ozolinikeza ifayela. futhi ungeze isandiso se-.m3u ekugcineni kwegama.
Uma ungangezi lolu lwazi, uhlu ngeke lukwazi ukuphinda lukhiqizwe izinhlelo zokusebenza noma izinhlelo lapho ufuna ukukhiqiza kabusha lolu hlu.
Manje njengoba usudale uhlu lwakho oluyimfihlo, kufanele uyolubeka kuhlelo lwakho lokusebenza oluncamelayo noma ohlelweni futhi ujabulele.
Uma namanje ungazi ukuthi ulungeza kanjani lolu hlu kulezi zinhlelo zokudlala, ungavakashela izifundo zethu lapho sizochaza khona isinyathelo ngesinyathelo ukuthi ululayisha kanjani uhlu lwe-M3U.
Siyazi kakade ukuthi uhlu lwe-M3U luqukethe izinto ezihlukahlukene kakhulu. Endabeni yohlu lwe-IPTV yaseMexico, ungathola zonke iziteshi zezemidlalo zasekhaya nezamazwe ngamazwe, izindaba, ifilimu namadokhumentari..
Ezinye zeziteshi kungaba:
I-Azteca A +.
Isiteshi 10 Chetumal.
I-Azteca Uno HD.
I-CableOnda Sports FC.
Ohlwini lwe-IPTV noma lwe-M3U uthola iziteshi ezivela emazweni ahlukene nezilimi ezahlukene futhi kungenzeka ukuthi akuyona le nto oyifunayo.
Ngakho-ke, uma useMexico futhi ufuna ukuthola uhlu lweziteshi namamuvi aseMexico, sikushiyela uhlu oluhle oluzokusiza uthole ukuzijabulisa okungcono kakhulu:
Manje njengoba sesifake uhlelo olusekela amafayela e-M3U, singagxila kuphela ekutholeni uhlu lwe-M3U olungcono kakhulu oluhambisana nesikhathi futhi mahhala ngo-100%.
Nakuba ngezinye izikhathi akulula kangako ukuthola lezi zinhlu, thina Sikwenzele ukusesha bese sikushiyela izinhlu ezihamba phambili ze-M3U ezibuyekezwa ukude futhi ukufinyelela kwazo kumahhala ngokuphelele..
I-Qviart Combo V2 iyisathelayithi yedijithali kanye ne-TDTHD decoder noma isamukeli, futhi enokwesekwa okujwayelekile kwe-DVB-T2 ne-DVB-S2. Isakazwa izinzile futhi isiza ukuqoshwa nganoma yiziphi izimbobo zayo ezimbili ze-USB, futhi ineMedia Player enekhwalithi yesithombe engavamile ngenxa yencazelo yayo engu-1080p FullHD.
Ukuze ujabulele ukuzijabulisa, kufanele ufake iziteshi ozikhethayo futhi nazi izinketho ezimbili, ngezinhlu neziteshi ngesiteshi:
Okokuqala lungisa uhlu oluyisipele noma ikhophi yasenqolobaneni yamashaneli, bese:
Faka i-pendrive yakho namashaneli bese ukhetha inketho ye-USB.
Khetha inkinobho ephuzi ethi “Layisha idatha".
Idivayisi izokucela ukuhambisana ngendlela yombuzo othi “¿Phakama?”, ophendula ngakho ukuthi“SI".
Isikhathi soku "Landa uhlu", eqaqa ifayela.
Uma ufaka i-pendrive kusikhikhoda, usuka esiteshini 1 uye Imenyu> Ukunwetshwa> Imenyu ye-USB.
Izokucela ukuthi uqinisekise"Ukuze ubuyekeze?"
Ngemva kwamasekhondi ambalwa uzokwazi ukuphuma kumenyu, futhi uvale idivayisi kusilawuli kude bese uvala ngokoqobo inkinobho yayo.
Uma uluqala futhi ngemva komzuzu, uhlu lwe-M3U kufanele selulayishiwe ku-Qviart Combo V2 yakho.
Note: Uma ingabuyekezwa, kufanele uhlole ukucushwa kwenethiwekhi. Futhi uma unesiteshi esishiywe ngemuva, ungalandela izinyathelo ezilandelayo.
Isinyathelo sokuqala ukufaka inketho ye-IPTV.
Ngemuva kwalokho uzobona isikrini esilandelayo:
Bese ukhetha inketho ngokubomvu ethi "Faka”Ukwengeza isiteshi esisha.
Iphasiwedi ezenzakalelayo izoba ngu-0000, faka futhi uqhubeke:
Ungafaka isiteshi ngezindlela ezimbalwa:
I-URL yesithombe: Ngokukhetha umcibisholo ongakwesokudla womyalo, ungafaka i-URL enesithombe esizoba isithonjana sesiteshi.
I-URL yevidiyo: Enye inketho ozoyibona uma uchofoza umcibisholo ongakwesokudla ukufaka i-URL yesiteshi esikhethiwe ku-IPTV.
Ifulegi labadala: eziteshini zabantu abadala.
Ngemva kokufaka i-URL yesiteshi nokukhetha KULUNGILE, qala ukulayisha isiteshi.
Isiteshi ngasinye silayisha cishe amasekhondi angu-45.
Ekupheleni kokufakiwe ngakunye, ikhasi lokuqala lizoveza ithayela. Yilapho obona khona umphumela obangelwa ukufakwa kwezithombe ezivela eziteshini. Uma singakayingezi ngezithombe izobukeka kanje:
6.Ukwengeza izithombe, vele ukhethe inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka ethi “Hlela".
Ngalezi zinyathelo ezilula ungakwazi ukwengeza iziteshi ozithandayo ku-Qviart Combo V2 yakho.
Sincoma ukuthi ulandele isinyathelo ngesinyathelo ukuze ufake Uhlu lwe-M3U ku-SS IPTV:
Iya kusicelo I-SSIPTV ku-Smart TV yakho.
Ibhokisi elilandelayo liyavula:
3.Khetha i Izilungiselelo, njengoba umcibisholo ubonisa:
Isikrini esilandelayo sizovela:
Okulandelayo kufanele ukhiqize ikhodi yokuxhumana. Khetha inketho Thola ikhodi (Umcibisholo 1), kanye nekhodi ye-alphanumeric kuzokwenziwa okufanele uyikopishe (Umcibisholo 2).
Manje yiya ekhasini elisemthethweni le- I-SSIPTV kusuka kusiphequluli sakho ngokuchofoza lapha
Uzobona isikrini esilandelayo
Faka ikhodi lapho isho khona Faka Ikhodi Yokuxhumana (Umcibisholo 1 esithombeni esilandelayo).
Khetha ENGEZA IDIVAYISI (Umcibisholo 2).
Leli khasi lizovula lapho kufanele uthole khona lapho lisho khona Uhlu lwadlalwayo lwangaphandle bese ukhetha ukungena ENGEZA INTO.
Iwindi le-pop-up lizovuleka
Kulokhu kufanele ufake idatha elandelayo:
Igama Elibonisiwe: Igama lohlu. Isibonelo: Uhlu lwami lwe-M3U
Source: I-URL yohlu lwe-M3U ofuna ukuyilayisha.
Iwindi le-pop-up lizovala futhi isikrini sizohlala lapho kufanele ulondoloze idatha efakiwe, ukhetha inketho
Kakade ekusebenziseni i-SmartTV yakho kufanele ubuyekeze ulwazi, ukhethe isithonjana se layisha kabusha phezulu kwesokudla semenyu:
Kusukela manje kuqhubeke ungakwazi ukubuka zonke iziteshi ngesixhumanisi sakho.
Kwenziwe kufakwe ngempumelelo uhlu lwakho lwe-M3U ku-SS IPTV.
Ukuze ukwazi ukusungula uhlelo lomuntu siqu lokukhiqiza kabusha, nokuqeda amafayela angadingekile, noma ukwengeza amasha. Ngaleyo ndlela uzisindisa enkingeni yokuwangeza ngawodwana.
Uhlu ngalunye kufanele ludawunilodelwe kudivayisi noma okungenani lulondolozwe kokuthi "I-akhawunti yami", esimweni sokusebenzisa i-ForkPlayer ku-Smart-TV.
Njengenothi elibalulekile okufanele likuqaphele, uma okufunayo kuwukulalela umculo, futhi unoxhumo oluhle lwe-inthanethi, awudingi ukulondoloza uhlu lokudlalayo. Kuzokwanela kuphela ukuyilayisha kusidlali, idivayisi yeselula noma i-PC.
igolide rush australia
Landa inguqulo yakamuva ye-WhatsApp Plus (AntiBan) APK
Landa i-Videoder Premium Apk 2022
Landa inguqulo yakamuva ye-YouTube Music Premium APK
Uhlu lwamahhala lwe-IPTV lwabadala (lubuyekezwe ngo-2022)
Ungalubuka kanjani uhlu lwe-IPTV ku-Kodi?
© 2022 MtresU • Idalwe nge GeneratePress